Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filimka Blockbuster-ka Weyn Noqday Chennai Express | Filimside –
Chennai Express waa filim Blockbuster weyn noqday sidoo kalena SRK, Deepika Padukone iyo Director Rohit Shetty mashruucaan amaan lixaad leh ku heleen.
Chennai Express oo la daawaday 8 August 2013 waxaan idin kaga heynaa heynaa xaqiiqooyin u gaar ah fadlan hoos kaga bogo:
Xaqiiqada 1-aad: Kareena Kapoor iyo Asin ayaa iska diideen doorka atirishada kowaad filimkaan waxaana calfatay Deepika Padukone oo filimkan awood lixaad leh ku heshay.
Xaqiiqada 2-aad: Filimkaan bilawgiisa magaca Deepika ayaa soo hor qormaayo halka SRK kadib lasoo qoraayo waxaana nidaamkaas sameeyay SRK asigoo kaga dan lahaa in dumarka Hindiya awood la siiyo madaama meel walbo lagu liido.
Xaqiiqada 3-aad: Chennai Express wuxuu ahaa filimkii ugu horeeyay ee Rohit Shetty sameeya kaasi oo aan Ajay Devgn hogaamiye ka ahayn.
Xaqiiqada 4-aad: Buundada Rahul (SRK) uu kula kulmaayo Deepika aabaheed marka ugu horeyso waa buuno loo dhisay filimkaan duubistiisa kadibna markii shaqadiisa dhamaatay la bur buriyay, madaama ay ka sameesneyd walxo loogu tala galay kaliya in filim lagu duubo oo aalada VFX lagu qurxiyay.
Xaqiiqada 5-aad: SRK si rasmi ah ayuu Deepika u xambaarsaday asigoo la socday 300-talaabo jaraanjar ama salaam la kraayo marka menderka loo socdo!
Xaqiiqada 6-aad: Chennai Express waxaa tiyaatarada la saaray Eid 2013 wuxuuna jebiyay iskoorkii u yiilay filimka 3 Idiots mudo 4-sano ah, madaama 3 Idiots 202 Crore keenay sanadii 2009 waxaana iskoorkaan dhaafay Chenna Express oo keenay 208 Crore.
Xaqiiqada 7-aad: Sathyaraj oo filimkaan ku jilaayo Deepika aabaheed waa Katappa ama filimka Baahubali 2 ninka dilaayo Prabhas (Baahubali) sidoo kalena ah abaan duuliha ciidanka boqortooyada.
Waxaa Aqriyay: 1,421